ကြောက်မက်ဖွယ် သြစတြေးလျတောမီးလောင်မှုကြားမှာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်နေနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တဝါလေးများ။ – SoShwe
Home/Other/Animals/ကြောက်မက်ဖွယ် သြစတြေးလျတောမီးလောင်မှုကြားမှာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်နေနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တဝါလေးများ။
ကြောက်မက်ဖွယ် သြစတြေးလျတောမီးလောင်မှုကြားမှာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်နေနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တဝါလေးများ။
ယခုဖော်ပြပေးမယ့်ဆောင်းပါကတော့ ပန်းရောင်ကိုယ်ထည်ရှိတဲ့ ပက်ကျိလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပက်ကျိလေးတွေဟာဆိုရင် အလျား ၂ဝစင်တီမီတာ (၈လက်မ) နီးပါးရှည်လျားကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း လုံးလုံးတုတ်တုတ်လေး ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ပန်းရောင်ပက်ကျိလေးတွေဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ Wale တောင်ပိုင်းဒေသက မီးငြိမ်းတောင်တစ်တောင်ဖြစ်တဲ့ Kaputar တောင်ထိပ်မှာ ကျင်လည်ကျက်စားပြီး တွေ့ရှိဖို့ရာခက်ခဲတဲ့ ရှားပါးမျိုးစိပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပက်ကျိလေးတွေဟာ ဆိုးရွားကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ သြစတေးလျတောမီးလောင်မှုကြီးမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေထိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မျိုးစိတ်တွားသွားသတ္တဝါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပန်းရောင်ပက်ကျိလေးတွေရဲ့ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအခေါ်အဝေါ်ကတော့ “Triboniophorus aff. Graeffei” ဖြစ်ပြီး အခြားသောပက်ကျိမျိုးစိပ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီပန်းရောင်ပက်ကျိတွေကို “ပက်ကျိဘုရင်”လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ထိုပက်ကျိလေးတွေကို အတွေ့ရအများဆုံးအချိန်ကတော့ မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပက်ကျိလေးတွေမှီခိုကျက်စားရာ အပင်တော်တော်များများက ၆ ပတ်အကြာ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုရဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရပြီးတာတောင်မှ ပက်ကျိလေးတွေ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေသေးတာဟာ တကယ်ကို အ့ံအားသင့်စရာကောင်းပါတယ်နော်။ ပန်းရောင်ပက်ကျိလေးတွေဟာ အခြားသောပက်ကျိတွေနဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေ စားသောက်နေထိုင်ပုံတွေကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆိုထားပါတယ်။
သြစတြေလျအမျိုးသားဥယျာဉ်မျူး Michael Murphy ဆိုသူက သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Kaputar တောင်တန်းမှာ တောင်မြင့်ဒေသပေါက်ပင်တွေဖြစ်တဲ့ Alpine သစ်ပင်အများအပြားကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပြီး အခြားသော သစ်တောတွေ၊ တောင်တန်းတွေမှာမရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိပ်တွေကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသေးကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ၾသစေၾတးလ်ေတာမီးေလာင္မႈၾကားမွာ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေနႏိုင္ခဲ့တဲ့ သတၱဝါေလးမ်ား။
ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ေဆာင္းပါကေတာ့ ပန္းေရာင္ကိုယ္ထည္ရွိတဲ့ ပက္က်ိေလးေတြအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါပက္က်ိေလးေတြဟာဆိုရင္ အလ်ား ၂၀စင္တီမီတာ (၈လက္မ) နီးပါးရွည္လ်ားၾကပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း လံုးလံုးတုတ္တုတ္ေလး ျဖစ္ေနတာကုိေတြ႔ရမွာပါ။
ပန္းေရာင္ပက္က်ိေလးေတြဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Wale ေတာင္ပိုင္းေဒသက မီးၿငိမ္းေတာင္တစ္ေတာင္ျဖစ္တဲ့ Kaputar ေတာင္ထိပ္မွာ က်င္လည္က်က္စားၿပီး ေတြ႔ရွိဖို႔ရာခက္ခဲတဲ့ ရွားပါးမ်ိဳးစိပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါပက္က်ိေလးေတြဟာ ဆိုးရြားေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ၾသစေတးလ်ေတာမီးေလာင္မႈႀကီးမွာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ မ်ိဳးစိတ္တြားသြားသတၱဝါေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါပန္းေရာင္ပက္က်ိေလးေတြရဲ႕ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာအေခၚအေဝၚကေတာ့ “Triboniophorus aff. Graeffei” ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာပက္က်ိမ်ိဳးစိပ္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဒီပန္းေရာင္ပက္က်ိေတြကို “ပက္က်ိဘုရင္”လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက တင္စားေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ ထိုပက္က်ိေလးေတြကို အေတြ႔ရအမ်ားဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ မိုးရြာၿပီးတဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါပက္က်ိေလးေတြမွီခိုက်က္စားရာ အပင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၆ ပတ္အၾကာ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈရဲ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရၿပီးတာေတာင္မွ ပက္က်ိေလးေတြ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနေသးတာဟာ တကယ္ကို အ့ံအားသင့္စရာေကာင္းပါတယ္ေနာ္။ ပန္းေရာင္ပက္က်ိေလးေတြဟာ အျခားေသာပက္က်ိေတြနဲ႔ ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အေရာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုေတြ စားေသာက္ေနထိုင္ပံုေတြကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဆိုထားပါတယ္။
ၾသစေၾတလ်အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ဴး Michael Murphy ဆိုသူက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ Kaputar ေတာင္တန္းမွာ ေတာင္ျမင့္ေဒသေပါက္ပင္ေတြျဖစ္တဲ့ Alpine သစ္ပင္အမ်ားအျပားကိုလည္းေတြ႔ရွိႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ သစ္ေတာေတြ၊ ေတာင္တန္းေတြမွာမရွိတဲ့ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိပ္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါေသးေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
Previous သခင်ဖြစ်သူကို အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုကနေ ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ခွေးလေး။
Next NBA ဘတ်စကတ်ဘောတံဆိပ်မှာ Kobe ရဲ့ရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းတော့မှာလား ? ? ?